गर्मी मौसममा कस्तो पहिरन उपयुक्त ? | Suvadin !
गर्मी मौसममा कस्तो पहिरन उपयुक्त ?
Jun 04, 2019 07:37
गर्मी मौसम छ। यसलाई फेसनको मौसम पनि मानिन्छ। जति-जति गर्मीको पारो चढ्दै जान्छ, तन्‍नेरीको पहिरनको आयतन उत्तिनै घट्दै जान्छ । फेसनेवल पुस्तालाई लाग्छ, समर सिजनमा आफ्नो पहिरनलाई मनलाग्दो एक्सपोज गर्न पाइन्छ । मौसममी परिवर्तनसँगै फेसनमा पनि थरीथरीका बान्की देखापर्न थाल्छ । हरेक सिजनमा परिहनले पनि विविधता खोज्छ । त्यसैले मौसम बद्लिएसँगै फेसनको रुपरंग पनि बद्लिन्छ ।
मानिस विभिन्न प्रकारका लुगा लगाउन रुचाउँछन् तर मौसमअनुसार कस्तो लुगा छान्ने भन्ने ध्यान राख्दैनन्। गर्मीमा निकै पसिना आउँछ। जसले गर्दा शरीरमा विभिन्न प्रकारका संक्रमण हुने सम्भावना हुने गर्दछ । शरीर चिलाउने अनि राता धब्बा आउने समस्या पनि आउन सक्छन्। त्यसकारण गर्मीमा हामीले आफू स्मार्ट पनि देखिने, शरीर पनि नपोल्ने र शीतलता पनि प्रदान गर्ने अनि ट्रेन्डी लुगा लगाउन मनपराउँछन् ।
कस्तो पहिरन लगाउने ?
सूतीका कपडाले पसिना सोस्ने काम गर्दछ र शरीर दुर्गन्धरहित बनाउँछ। यसले शरीरमा तौलियाका काम गरी छालामा मोस्चराइचरको कमी हुन दिँदैन। ब्याक्टेरिया र फंगल इन्फेक्सनबाट पनि बचाउँछ। सूतीका कपडाले शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न संक्रमणबाट पनि टाढा राख्छ। सिन्थेटिक कपडा गर्मीमा पटक्कै लगाउन हुँदैन। सिन्थेटिक कपडाले पसिना सुकाउँदैन।
घामको रापमा खुला एवं हल्का पहिरन सजिलो हुन्छ । हिँडडुल गर्दा होस् वा कुनै काम गर्दा, लुज पहिरन उपयुक्त हुन्छ । यस्ता लुगामा पसिना आउने तथा बाफिने समस्या हुँदैन । फेसन डिजाइनर समा बानु भन्छिन्, ‘स्टाइलिस देखिने चक्करमा फिटिङ्स पहिरन ठिक हुँदैन ।’ अहिले फिटिङ्स पहिरनकै ट्रेन्ड छ । तर, गर्मीमा यस्तो पहिरन सहज नहुने डिजाइनरहरुको भनाई छ । उनीहरु भन्छन्, ‘फेसन भनेको मौसम अनुकुल हुनुपर्छ । त्यसैले गर्मीमा खुला एवं हल्का पहिरन लगाउनुपर्छ ।’
गर्मीमा हल्का लुगा लगाउनुपर्छ तर, छोटो लुगा त्यती उपयोगी हुँदैन । खासगरी घरबाहिर वा खुला घाममा हिँडडुल गर्नेले पुरा शरीर ढाक्ने पहिरन लगाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । जाडोमा शरीरलाई न्यानो राख्न शरीर ढाक्ने पहिरन लगाउनुपर्छ । गर्मीमा चाहिं घामको सोझो प्रभावबाट बच्नका लागि । लुगा पातलो र हल्का हुनुपर्छ, तर शरीरको पुरै भाग ढाक्ने हुनुपर्छ । यसले छाला कालो हुने, रुखो हुने समस्या हुँदैन । अन्याथा, कपडाले नढाकिएको खुला भाग घामले कालो हु्रन्छ । अध्ययनहरुले के पनि भनेको छ भने, घामको सोझो किरणले छालाको क्यान्सर पनि हुनसक्छ । त्यसैले गर्मीमा सकेसम्म पुरा शरीर ढाक्ने पहिरन लगाउनुपर्छ । यदि सबै भाग नछोपिएमा, त्यसमा सन प्रोटेक्सन क्रिम लगाउनु उपयोगी हुन्छ ।
हल्का रंगको कपडा लगाउनुस्
सेतो, पहेँलो, क्रिम कलर आदि रंगका लुगाहरु उज्यालो हुनुका साथै यसले शरीरलाई शीतलता पनि प्रदान गर्छ। यस्ता रंगले घामको प्रकाशलाई परावर्तन गर्ने काम गर्छ। तर अलि गाढा रंगले घामको प्रकाश सोस्छ र बढी गर्मी गराउँछ ।
उपयुक्त स्टाइल अपनाउनुस्
गर्मीमा हामी प्राय: छोटाछारिता अनि बाहुलाबिनाका लुगा लगाउँछौँ तर यस्ता लुगाहरु लगाउनु त्यति राम्रो होइन। किनभने यसले छाला एक्सपोज हुन्छ र घामले डढ्ने समस्या हुन्छ। गर्मीले छालामा रहेको मोस्चराइजर सुकाउनुका साथै चाँडै चाउरी तथा चायाँपोतो आउने सम्भावना पनि प्रबल पार्छ। मध्य एसियाका बासिन्दा टाउकोदेखि खुट्टासम्म छोपिएको लुगा लगाउँछन्। घामबाट जोगिनका लागि त्यसो गरिएको हो। गर्मीमा खुकुलो प्यान्ट, लामो स्कर्ट, खुकुलो टप्स लगाउनु पर्छ। खुकुलो सलवार कमिज पनि राम्रो विकल्प हो।
गर्मीमा बाहिर निस्किनु छ भने स्कार्फ, ह्याट, चस्मा, छाता बोक्न कहिल्यै नर्बिसिनुस्। यसले तपाईको मुहारलाई घामको शक्तिशाली विकरणबाट बच्न मद्दत गर्छ। यसले आँखालाई पनि जोगाउँछ र शीतल पनि राख्छ।